Etu ị ga-esi wepu ebe nchekwa na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Wayszọ asaa ịhapụ ebe nchekwa na gam akporo
Villamandos | | android, Mobiles, mbadamba
Akụkụ buru ibu nke smartphones ndị ruru ahịa na sistemụ arụmọrụ gam akporo na-eme ya na ohere nchekwa dị n'ime nke 16 GB ma ọ bụ karịa. Nke a na - achota na nsogbu nchekwa abanyela na ọrịa strok, ọ bụ ezie na ọ dị mwute na a ka nwere ọnụ na-enye anyị naanị 8 GB nke nchekwa dị n'ime na nsogbu na-adịghị agwụ agwụ maka ndị niile nwetara ya.
Mụ onwe m ga-ata ahụhụ nsogbu ndị a ụbọchị ole na ole gara aga, n'ihi na enwere m ohere ịnwale otu n'ime ama ama ama na ahịa, nke na-enye naanị onye ọrụ 8 GB nchekwa, nke naanị ya dị maka ojiji. " ", ọkara. N'ihi ọtụtụ nsogbu m ga-eche ihu n'oge ụbọchị ole na ole, ekpebiri m ịde n'isiokwu a nke m ga-egosi gị usoro Ndụmọdụ dị jụụ ịhapụ ohere nchekwa.
Ọ bụrụ na ịmaghị, ọ dị mkpa ka ị gụọ ndụmọdụ ndị a ma tinye ha n'ọrụ ebe ọtụtụ ngwaọrụ, mgbe ha na-enweghị ohere nchekwa dị n'ime, ekwela ka ị rụọ usoro ụfọdụ, nke kachasị mfe, dị ka izipu na ịnweta SMS ma ọ bụ wụnye ngwa ọhụrụ ebudatara na ụlọ ọrụ ngwa ngwa Google ma ọ bụ ihe bụ otu Google Play.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba na sistemụ arụmọrụ gam akporo, wepụ akwụkwọ na pensụl n'ihi na n'isiokwu a ị ga-ahụ ya ihe ngwọta nye nsogbu ndị ị na-ata ahụhụ kwa ụbọchị na oke nchekwa dị n'ime na i nwere na ọnụ gị.
1 Iwepụ ngwa
2 Gbanyụọ ngwa ị na-ejighi
3 Hichapụ oghere
4 Hichapụ faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ ndị ibudatara
5 Hichapụ ihe oyiyi, vidiyo na ọdịnaya multimedia ndị ọzọ
6 Jiri igwe ojii rụọ ọrụ
7 Dị njikere na ngwaọrụ gị enweghị oghere microSD
Ndụmọdụ mbụ maka ịhapụ ohere nchekwa na ngwaọrụ gam akporo anyị dị mfe ma ọ bụghị onye ọzọ karịa nke iwepụ ngwa anyị anaghị eji. Anyị nwekwara ike iwepụ ngwa anyị nwere oyiri nke anyị ji eme ihe yiri ya.
Iwepu ngwa ị ga-aga Ntọala ma ozugbo enwere ike ịhọrọ nhọrọ Jikwaa ngwa. Kpachara anya na ihe ị na-ewepụ n'ihi na ị nwere ike ịbanye na nnukwu nsogbu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'amaghị ama.
Gbanyụọ ngwa ị na-ejighi
Dị ka ị maraworịrị, ụfọdụ ngwa arụnyere yana sistemụ arụmọrụ yana ya enweghị ike iwepụ ha na-eso usoro nkịtị. Agbanyeghị, ihe anyị nwere ike iji ngwa niile bụ gbanyụọ ha, nke ga - eme ka ha ghara iri akụrụngwa sistemụ yana na ha nọkwa na ọdụ anyị na - ebi opekempe ohere enwere ike ebe ọ bụ na ịkwụsị ha na-ewepụkwa mmelite niile etinyegoro.
Ọ bụrụ na ịgaghị eji ngwa ọ bụla arụnyere na sistemụ ahụ, gbanyụọ ha ka ha wee rie obere ohere ma ghara irikwa akụ nke ụdị ọ bụla.
Ikpocha oghere bụ ihe ole na ole n'ime anyị na-eme kwa oge, mana nke ahụ na-enye ohere ịhapụ nnukwu ebe nchekwa na ngwaọrụ anyị.
Ikpochapụ ụdị ebe nchekwa a pụtara ihichapụ data niile echekwara nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu arụnyere.
Dị ka nke mbipute 4.2 nke sistemụ arụmọrụ gam akporo, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ihichapụ oghere dị na Ntọala wee banye nhọrọ Nchekwa, ka ịpịa pịa data nchekwa.
Iji hapụ ụdị ebe nchekwa a, ọ ga-ekwe omume ịbanye na ngwa ndị a ma ama dịka Nna ukwu dị ọcha o CCleaner, Ọ bụ ezie na nkwanye anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere obere ohere abụghị ịwụnye ngwa ndị ọzọ na ngwaọrụ anyị.
Hichapụ faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ ndị ibudatara
N'ọtụtụ oge, anyị na-eji ekwentị mkpanaaka anyị ebudata akwụkwọ, nke nwere ike ịgụnye, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ ọnụahịa, akwụkwọ azụmahịa ma ọ bụ ụdị akwụkwọ ọ bụla. O doro anya na ndị a weghara ohere n'ime ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ ka a na-atụ aro ya nke ukwuu mgbe ịlere ma nyochaa gị ịhichapụ ha.
Ọ bụrụ na ihichapụghị ha ka ị na-ebudata ha, ịnwere ike ihichapụ ha niile otu oge site na Downloads ngwa. Ọ bụrụ na ihichapụghị akwụkwọ ị na-ebudata na ogologo oge, ị nwere ike ịnweta ọ joyụ obi ụtọ, n'ụdị ohere, mgbe ị ga-ehichapụ faịlụ.
Hichapụ ihe oyiyi, vidiyo na ọdịnaya multimedia ndị ọzọ
Foto niile ndị ahụ ị na-agbanye n'ikuku, nke a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ na i meghachiri ugboro ugboro weghara ohere na ọtụtụ n'ime anyị nwere ha site na iri na abụọ na veranda anyị. Ọ bụrụ na ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị dị na njedebe Nọdụ ala nwayọ wee bido ihichapụ foto ndị ahụ niile, vidiyo, egwu na faịlụ ndị ọzọ ị na-achọghị ma ọ bụ baara uru ọ bụla ma ọ bụ na ị kwughachiri.
Enwere ọtụtụ ngwa na-achọ ihe onyonyo ugboro ugboro ma ọ bụ ndị na-anaghị arụ ọrụ, mana ọzọ nkwanye anyị, ebe ọ bụ na anyị nwere obere ohere, bụ na ị naghị etinye ngwa ndị ọzọ ga-eri ebe nchekwa n'ụzọ enweghị isi.
Jiri igwe ojii rụọ ọrụ
Ọtụtụ ọrụ nchekwa igwe ojii na-enye anyị ọtụtụ gigabytes, iji chekwaa onyonyo anyị niile ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị chọrọ, kpamkpam n'efu ma ọ bụ maka ọnụ ala dị oke ala.
Upbugo ihe onyonyo anyị n'otu n'ime ọrụ ndị a na-enye anyị ohere ịhapụ nnukwu ohere nchekwa na ngwaọrụ anyị, mana enwekwara ike ịchekwa ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ama ama anyị furu efu ma ọ bụ zuo ohi ebe ọ bụ na foto anyị niile ga-adị mma.
Dị njikere na ngwaọrụ gị enweghị oghere microSD
O nwere ike iyi nzuzu, ma ọ bụrụ na m tinye ya n'isiokwu a, ọ bụ n'ihi na ihe karịrị otu onye ọrụ, gụnyere onwe m, anyị nwere ọtụtụ nsogbu na nchekwa dị n'ime ngwaọrụ anyị ruo mgbe anyị ghọtara na ihe ahụ dị n'akụkụ nke Kaadi SIM bu maka itinye kaadi microSD.
N'ihi ya Gbalia ihu mgbe nile tupu ịbịaru atụmatụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ nwere ohere ịgbasa nchekwa dị n'ime iji otu n’ime kaadị ndị a, nke ga-eme ka anyị pụọ karịa otu ọsọ ọsọ ma nwee ike zụta maka euro ole na ole.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na enwere ike ịhapụ ohere nchekwa na ngwaọrụ anyị yana ị kwesịrị itinye n'ọrụ, n'echiche anyị, ma inwere obere ma ọ bụ ọtụtụ ohere, nke ahụ bụ ihe onyonyo ugboro ugboro ma ọ bụ faịlụ na-abaghị uru. efela onye ọ bụla.
Kedu usoro ma ọ bụ ngwa ị na-eji hapụ ohere nchekwa dị n'ime ngwaọrụ gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Wayszọ asaa ịhapụ ebe nchekwa na gam akporo
Easierzọ ọzọ dị mfe .. throw tufuo ekwentị na mkpofu ma zụta iPhone nke nwere "draịvụ ike" ma ghara nwayọ.
N'ezie ị nwere ike itinye microsd na iphone ma ọ bụ wepụ batrị mgbe ọ dara …… .. Mba…. na ị gaghị enwe ike
Ma, ebe iphone ndị oké ọnụ na mgbe ina-egbochi….
Olee agụụ mmekọ na ha adịghị akwụsịlata na-ekwu ...
Ndị a bụ Nexus smartphones niile anyị nwere ike ịnụ ụtọ ruo taa